युवा व्यवसायी घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनौँ’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १७:३३ English
युवा व्यवसायी घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएनौँ’
काठमाडौँ, ११ जेठ । रामेछापको मन्थली नगरपालिका ४ मा जन्मिएका शक्ति घिमिरे युवा व्यबसायी हुन् । हाल काठमाडौमा ‘हटवीन आल्मुनियम प्रा. लि.’ सञ्चालन गरिरहेका उनी अहिले व्यबसाय पूर्ववत् अवस्थामा कहिले फर्किने हो भन्ने सोचाइमा व्यस्त छन् । लकडाउनको कारण धेरै व्यबसायको अबस्था नाजुक हुने हो कि भन्न अनुमान गरिदै छ । लकडाउनले व्यबसायीक क्षेत्रमा कस्तो असर परिरहेको छ त ? पढौ घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः
तपाईले यो व्यवसाय अंगाल्नुको प्रमुख कारण के हो ? यसबाट रोजी रोटी चलेको छ त ?
जो मान्छेसंग जे सिप हुन्छ त्यो मान्छे त्यही पेशासंग रमाउदो रैछ । मैले पनि यही आल्मुनियमको काम गरेँ भने अगाडी बढ्छु जस्तो लाग्यो मसँग यही सिप थियो । त्यही भएर यो काम सुरु गरेको हुँ । अहिले यही ब्यबसायबाट मैले मेरो परिवारको सम्पूर्ण आबश्यकता पूरा गरेको छु, यसको मतलब परिवारलाई धानेकै छु , पालेकै छु ।
अहिले कोरोना भाइरसको कारण सिङ्गो देश लकडाउनमा छ, तपाईको ब्यबसायमा यसको कस्तो प्रभाव पर्यो ?
संसारलाई परेको असर मेरो ब्यबसायमा परेन भन्ने त प्रश्नै रहेन । आज हामी जुन प्रतिकुल समयमा चलिरहेका छौ यसले म अनि म जस्ता सबै ब्यबसायीलाई ठूलो असर गरेको छ । बैङ्कको कर्जा लिएर कम्पनी चलाउने हरुलाई यो भन्दा ठूलो दुर्दशा अरु के हुन सक्छ र ? अहिले हाम्रो ब्यबसाय टाट पल्टिने अबस्थामा छ । अझ यो लकडाउन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने पनि यकिन छैन । यसको दिर्घकालीन असर हाम्रो ब्यसायमा पक्का पनि पर्नेछ ।
यो अन्योलपूर्ण अबस्थामा राज्यबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हाम्रो राज्य निरिह छ । सरकार छ कि छैन हामीलाई कुनै आभास नै छैन । देशमा यति ठूलो महामारीको अबस्था आउँदा पनि सरकार आफ्नै आयू जोगाउने खेलमा पासा थापिरहेको छ । हामी चाहन्छौ कि सरकारबाट हाम्रो जस्तो धरासायी ब्यबसायको पूर्ण ग्यारेन्टी होस् । तर यो सपना जस्तै भै रहेको छ । हामीले चाहेको केही कुरा पनि राज्यबाट नहुनु हामीले पनि नेपाल सरकार छ भन्ने अनुभूति नगर्नु नै हो ।
जब सरकार छ भन्ने अनुभूति नै छैन भने अपेक्षा गर्नुको अर्थ के रह्यो र ?
तपाईले राज्यलाई मात्र दोष लगाएर हुन्छ, तपाईले अहिले सम्म राज्यको लागि के गर्नु भो यो पनि त मह्त्वपूर्ण कुरा होला नि हैन र ?
मैले राज्यलाई दोष लगाएकै हैन । सरकार निकम्मा छ । म स्वतन्त्र नागरिक भएर यो कुरा भन्न नपाउने ? हामीले राज्यलाई गर्नु पर्ने सबै कर्तब्य निर्बाह गरेका छौ । राज्यले तोकेको कर पनि तिरेकै छौ, यति हुदाहुदै पनि राज्यले ब्यबसायीको ब्यबसायलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टि दिनु पर्छ कि पर्दैन त ? सवाल यो बिषयको हो ?
यसको मतलब अब राज्यले सहयोग गरेन भने तपाईहरु आफ्नो ब्यवसायबाट पलायन हुने अबस्थामा हुनुहुन्छ, हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ ?
मैले मेरो मात्रै समस्याको कुरा गरेकै हैन । नेपालको ब्यबसायी म मात्रै हो र ? लाखौ ब्यबसायी छन् । सबैको अबस्था सुखद छैन । भर्खर मात्र ब्यबसाय गरेकाहरुको पनि अबस्था नियालौ न, उनीहरु के गर्दै होलान ? बढो गम्भिर बिषय छ मित्र । यस्तो समयमा कमसेकम सरकारले ब्यबसायीहरुको लागि त ठोस निर्णय ल्याउन सक्नु पर्यो नि ? करबाटै राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा गर्ने अनि ब्यबसायीको समस्यामा सरकार लाचार बन्ने यस्तो पनि हुन्छ दुनियामा ?
राज्यको आर्थिक पाटो त तपाईहरुको करले मात्रै चलेको हैन होला नि, रेमिट्यान्सको पनि ठूलो भूमिका छ भन्थ्यो हिजाको दिनमा त सरकार ?
बढो सान्दर्भिक कुराको उठान गर्नु भो । म पनि धेरै बर्ष खाडी मुलुकमा श्रम बेचेर आएको मान्छे हुँ । पछिल्लो समय आफ्नो पसिना आफ्नै देशमा बगाउनु पर्छ भनेर मात्रै ब्यबसायमा लागेको हुँ । उसो भा आज लाखौ नेपाली बिदेशमा अलपत्र छन् । कोरोना भाइरसको कारण काम सबै देशमा ठप्प जस्तै छ । सबै नेपाली आफ्नै देशमा फर्कन चाहन्छन् । सरकारले यो बिषयमा के पहल गर्यो त ? हिजोको दिनमा सहज हुँदा रेमिट्यान्सको कुरा गर्ने अनि आज असहज परिबेशमा तिनै युवाहरुको बेवास्ता गर्ने । अब बिदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक यो सरकारलाई कहिलै चाहिदैन त ? सवाल फरक छ ।
त्यसैले यो बिषम् परिस्थितिमा सरकारले पनि आम नागरिकको समस्या बुझ्नुपर्छ हामीले पनि सरकारलाई सकारात्मक कार्यको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ठम्याइ हो मेरो ।
११ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:३३ मा प्रकाशित